चीन र भारत यु’द्धको तयारी गर्दै, को कति शक्तिशाली ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/चीन र भारत यु’द्धको तयारी गर्दै, को कति शक्तिशाली ?
चीन र भारत यु’द्धको तयारी गर्दै, को कति शक्तिशाली ?
बेइजिङ : लद्दाखस्थित गलवान घाटीमा हालै भएको संघर्षपछि भारत र चीनबीच त’नाव बढेको छ। सहमतिका लागि वार्ताहरू भइरहे पनि चीनले अहिले सीमामा आफ्नो फौ’ज लगातार बढाइरहेको समाचार प्रकाशनमा आइरहेको छ।
सन् १९९६ को सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार दुवै देशलाई वास्तविक नि’यन्त्रणको रेखा (एलएसी)मा ह’तियार प्रयोग गर्न नि’षेध गरिएको छ। त्यसैले चीनले आफ्ना ल’डाकुलाई सैनिक तालिम दिनका लागि तिब्बती ल’डाकुलाई पनि भर्ना खोलेको छ।
तिब्बती ल’डाकुहरू परम्परागत यु’द्धमा माहिर हुन्छन्। उनीहरू लट्ठी, भाला, डन्डा तथा रडले यु’द्ध गर्न सिपालु मानिन्छन्। यही माध्यमबाट चीनले अब भारतसँग यु’द्ध गर्ने तयारी गरिरहेको छ। पिपुल्स डेलीको रिपोर्टअनुसार तिब्बतको पठार इलाकामा बसोबास गर्ने यी लडाकुले चिनियाँ सैनिकलाई विभिन्न हतियारले यु’द्ध गर्नका लागि तालिम पनि दिइरहेका छन्।
भारत र चीनले दुवै देशबीचको आपसी विश्वास बढाउन सन् १९९६ र सन् २००५ मा सम्झौताहरू गरेका थिए। सम्झौताअनुसार दुवै देशका सैनिक गस्तीको समयमा आमनेसामने भए पनि गो’ली चलाउन नि’षेध गरिएको थियो। यसका साथै दुवै देशका सेनाले गस्तीको समयमा एलएसीको दुई किलोमिटरसम्म आफ्नो रा’इफलको ब्यारललाई जमिनतिर झुकाएर राख्नुपर्ने नि’यम राखिएको थियो। बिनासूचना एलएसीको १० किलोमिटरभित्र दुवै देशका सैन्य विमानको उ’डानलाई पनि प्र’तिबन्ध लगाइएको थियो।
यही सम्झौताले गर्दा नै सन् १९७५ यता एलएसीमा शान्ति कायम थियो। आजसम्म दुवै देशबीच त्यस्तो घ’टना भएको थिएन। तर, अहिले उक्त सम्झौताविपरीत कदम चालिएको भन्दै दुवै देशले एकअर्कालाई दो’षारोपण गरिरहेका छन्। भारतले पनि अहिले स्थिति हेरेर ह’तियार चलाउन आफ्ना कमान्डरलाई आदेश दिएको केही भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनले पनि सीमामा धेरै तोप, ट्यांकर र अन्य ह’तियार तयारी अवस्थामा राखेको छ। त्यसैगरी भारतले चीनको सीमा नजिक तैनाथ स्थल र वायु सेनालाई सचेत गराएको छ। भारतीय नौसेना पनि हिन्द महासागर क्षेत्रमा लगातार गस्तीमा रहेका जनाइएको छ।–एजेन्सी